Ciidamada DFS & Kuwa AMISOM Oo Howlgal Ka Sameeyay Degmada Raaga-Ceelle Ee Gobolka Shabellaha Dhexe – Great Banaadir
Ciidamada DFS iyo kuwa Burundi ee qeybta ka ah AMISOM ayaa howlgalo wadajir ah ka wada Degmada Raaga Ceelle iyo deegaanada ku xeeran sida uu Axadle u xaqiijyeen saraakiil kala duwan.
Howlgalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku heynta degmada 24-kii saac ee la soo dhaafay, dadka rayidka ahna ay walaac xoogan ka muujiyeen.
Ciidamada ayaa sameeyay howlgalo dhowr ah oo ay kamid yihiin miino baarista, iyagoo galay xaafadaha qaar iyo hubinta gawaarida, si looga hortago Al-Shabaab inay qaraxyo fuliyaan sida ay sheegeen saraakiisha Maamulka Raaga Ceelle.
Ciidamada Burundi ayaa fariisimo ka sameystay banaanka degmada, iyadoo qaarkood xalay ay ku hoydeen Degmada Raaga Ceelle xalay, kadib markii shalay ay galeen Ciidamada Dowladda Federaalka.
Saraakiisha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa yeeshay kulan gaar ah oo wax looga qabanayo cabsida iyo cadaadiska ku soo kordhaya Degmada Raaga Ceelle, waxayna go’aansadeen in ay sameeyaan howlgal looga hortagayo in degmadu ay go’doon noqoto. – Axadle News